Dagaallo cusub oo caawa ka billowday xaafadihii ay isku hor fadhiyeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa ka soo horjeeda iyo Sheekh Adan Madoobe oo sheegay in uu xilka ka qaaday xildhibaano ka soo horjeeda ciidamada Itoobiya ee dalka qabsaday. Ruunkinet 17/04/07
Dagaallo laysu adeegsaday madaafiicda culus iyo kuwa fudud ayaa caawa ka billowday xaafadda Xamar Bile, agagaarka Cali Kamiin iyo Stadiyo Muqdisho oo ay isku hor fadhiyeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa ka soo horjeeda ee u badan maleeshiyada beelaha Hawiye ee magaalada Muqdisho.
Dagaalkan oo aan weli la ogeyn khasaaraha uu geystay ayaa la sheegay in uu si xoog badan uga socdo aagaasi ayadoo la filayo in uu ku faafo xaafada kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho.
Dagaalkan oo billowday markii laga soo baxay salaadda cishaha ee saacadda magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa in qoryaya BM-ka laga soo tuurayo madaxtooyada ayadoo lala beegsanaya dadka rayid ka ah ee weli ku sugan xaafadaha dagaalka ka socdo.
Dhanka kale, kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Baydhabo xildhibaannada taageersan joogitaanka ciidamada Itoobiya ayaa sheegay in ay ka soo saareen kulankooda war uu Sheekh Adan Madoobe ku caddeeyay in 31 xubnood ay xilka ka qaadeen.
31kan ayaa waxaa ugu horeeya Shariif Xasan Sheekh oo haatan ku sugan magaalada Casmara ee dalka Eriteriya.
Arrintan ayaa la sheegay in ay sii kordhineyso khilaafka u dhexeeya labada garab ee xildhibaanada baarlamaanka oo u kala qeybsan kuwa diidan ciidamada Itoobiya iyo kuwa doonaya in ay joogaan.
Ciidamada Itoobiya oo la sheegay in ay galeen tacaddiyo aad u fool xun ayaa dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay sii nacayaan sida uu sheegayo warar aan ka qaar ka tiran dadka ku nool magaalada Muqdisho.